Ny gilasy FitFreeze dia mitazona anao ho feno, hahazo hery ary ho afa-po. Ankoatry ny maha be proteinina azy, ny FitFreeze dia feno fibre koa ary tsy misy gluten. Serivera an'ny gilasy Fitfreeze 7 grama feno fibre iray izay avo valo heny noho ny epinara! Ity gilasy ity dia ambany kokoa amin'ny siramamy noho ny isan'ny kapoaky ny gilasy koa. FitFreeze dia misy zava-mamy namboarina aotra ary mahaliana izay ho tian'ny fianakavianao manontolo! Liana amin'ny santionanao maimaimpoana amin'ny FitFreeze? Tsindrio eto mba hahazoana anao anio